Die Kukanda Mould, kufa tichiwisira Company, Aluminum Die Cast - Daqi Hongxiang
High nokukurumidza CNC machine
Aluminum ufe Kudzingwa muforoma
Peturu injini dzino
Electrical nhengo dzinoti
Akatungamirira chiedza dzino
Jekiseni epurasitiki chikamu
Cnc machine chitarisiko?
nei sarudza cardone
Ningbo Beilun Daqi Hongxiang Mould Machinery Co. Ltd. iri mu yakakurumbira mutaundi rokumusha chakuvhuvhu, Ningbo-Beilun.
Boka redu unyanzvi vari kugadzira uye mukugadzira mhando dzose chakuvhuvhu & kufa-vachikanda chikamu. It kwapfuura ISO9001: 2015 dzakawanda unhu hurongwa authentication.
Foroma uye chikamu chedu chikuru dzino vari: Automobile, Peturu injini, Motorcycle, Communication chikamu, akatungamirira chiedza, Power Danho, Radiators Pump, Household midziyo yemagetsi, Electronics, etc.
Hatina specialized zvakagadzirwa chikwata kupa pachake magadzirirwo uye zvose mabikirwo Data. Pane zvemberi mumhanyi simulation Software: JSCAST-VER13 kweJapan, Germany MAGMA, nokuti pokuongorora gating hurongwa design, uye CAE, Cam uye nyanzvi 2D / 3D magadzirirwo Software: CAD, UG uye Pro / E ...
German motokari pabutiro
Japan KEIHIN CPU pechifukidziro
Japan ISUZU giya pabutiro nyaya
Kia K5 camshaft chikomboredzo vakavirikidza in
Sweden autolive chokurukisa mu bhandi chengetedzo
Japan ISUZU giya nguva
Vacuum muforoma kuti vharafu misa
Automobile vharafu muviri
4G18 Oil pombi pechifukidziro
Peturu injini Housing
SUZUKI batira pabutiro
State muenzi motokari CFMOTO injini pechifukidziro
Batira chifukidziro vakavirikidza in
NBA China and the Alibaba Group have anno...
An “NBA Section” will be launched across Alibaba’s platforms. Leveraging Alibaba’s technology and consumer insight, this will allow fans in China to enjoy personalized and engaging content, in ...
Mune chimwe chiratidzo kuwedzera nemagariro Genesi ...
Senior Machinda nyika mbiri vakapemberera kudzorerwa pa nezvechiitiko wakaitwa muna Eiteljorg Museum iri Indianapolis, guta guru US mamiriro Indiana, apo zvidimbu 20 zvinoera uye zvinoratidza dzakanga von ...
Ningbo Hongxiang Mold team had started work from 15th, hope everyone had a wonderful CNY holiday!
tenda kuti nguva yako
- Power ne Globalso.com